တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်ရှိ မြို့များ မီးခိုးမြူကျဆင်းနိုင်သည့် ထိပ်တန်းစာရင်းတွင်ရှိေ?? - Yangon Media Group
တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်ရှိ မြို့များ မီးခိုးမြူကျဆင်းနိုင်သည့် ထိပ်တန်းစာရင်းတွင်ရှိေ??
ရှန်ဟိုင်း ဇန်နဝါရီ ၁၈
ယခုနှစ်ဆောင်းရာသီအတွင်း လေထုအရည်အသွေးမြင့်တင်စေရန် ကမ်းပိန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်ရှိ မြို့ ၆ ခုမှာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မီးခိုးမြူအထူထပ်ဆုံး မြို့ ၁၀ ခုစာရင်းတွင် ယမန်နှစ်ကဲ့သို့ပင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနက မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး စတီးလ် ထုတ်လုပ်သည့် ဒေသဖြစ်သည့် ဟူဘေးပြည်နယ်သည် ဆောင်းရာသီတစ်ခုလုံးတင် မြူထူဖြစ်ပေါ်မှုကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်လျက် အထူးခြောက်လကြာ စီမံကိန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စတင်ခဲ့သည်။ အပူပေးမှုအတွက် ဘိုင်လာ များဖွင့်ကြသည့်အခါ ကျောက်မီးသွေးအသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လေထုညစ်ညမ်းစေသည့် ပစ္စည်းများကို တိုးမြင့်လာစေသည်။
ပတ်​​ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များ၏ အဆိုအရ ဟူဘေးပြည်နယ်မြို့တော် ရှီကျီရွန်းမြို့ တွင် တိုင်းထွာရရှိခဲ့သော အဆုတ်ထဲသို့ ရှုသွင်းလိ်ုက်ပါက အသက်ရှုစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ၂ ဒသမ ၅ မိုက်ခရွန်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဒေသအားလုံးတွင် တိုင်းတာခဲ့သော ပျှမ်းမျှအမြင့်ဆုံး တိုင်းတာရရှိချက်ဖြစ်သည်။ ဟူဘေးပြည်နယ်၏ မီးခိုးမြူ အဆင့်သည် တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ပေကျင်းအပေါ် ဆိုးရွားသော ရိုက်ခတ်မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လေထုညစ်ညမ်းမှု အဆိုးရွားဆုံးမြို့ ၁၀ ခုတွင် ဟူဘေးပြည်နယ်မှ ဟန်ဒန် နှင့် တနမ်ရှန်မြို့တို့ပါဝင်သည်။
ကျိုင်းတုံနှင့် ဖောင်းပြင်မြို့များ အနီးတွင် အင်အား အသင့်အတင့်ရှိ မြေငလျင်များ လှုပ်ခတ်
တူရကီက ကာ့ဒ်သူပုန်တို့ကို မြေပြင်တိုက်ပွဲ စတင်ဆင်နွှဲ
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စိစစ်ရန် အမှုတွဲပေါင်း ??
မန်းပဲဈေးကွက်တွင် အိန္ဒိယဝယ်လက်ရှိနေသည့် မတ်ပဲအသစ်များ အရောင်းသွက်နေပြီး ပဲစင်းငုံ(နီ)အသစ
မလေးရှား အစိုးရ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် နိုင်ငံခြား လုပ်သားများ လဲဗီးကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ကို မြန်မ??